यस बर्षका सर्बाधिक गोलकर्ता केनलाई बार्साले भित्र्याउने कसरत, कति तिर्दैछ केनका लागि ? « Postpati – News For All
यस बर्षका सर्बाधिक गोलकर्ता केनलाई बार्साले भित्र्याउने कसरत, कति तिर्दैछ केनका लागि ?
वर्षको अन्तिम खेलमा सनसनीपूर्ण ह्याट्रिक गोल गरेर २०१७ को सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका इंग्लिस स्टार ह्यारी केनमाथि स्पेनिस बार्सिलोनाले भित्र्याउन चाहेको खबर छ । बार्सिलोनाले अहिले नै औपचारिक रूपमा केनका लागि प्रस्ताव गरिनसके पनि केनलाई भित्र्याउनेबारे आन्तरिक कसरत भने थालेको इंग्ल्यान्डका पूर्वकप्तान एलन सिएररले दाबी गरेका छन् ।
उनले बिबिसीसँग कुरा गर्दै यस वर्षको प्रदर्शनपछि बार्सिलोनाले केनलाई केन्द्रमा राखेको बताएका हुन् । मंगलबार केनले सनसनीनपूर्ण हयाट्रिक गर्दै बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी स्टार लिओनल मेस्सीलाई सर्वाधिक गोल संख्यामा पछि पारेपछि बार्सिलोना थप गम्भीर भएको दाबी सिएररले गरेका छन् ।
२४ वर्षीय केनले प्रिमियर लिगअन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा साउथह्याम्पटनलाई ५–२ ले हराउनेक्रममा टोटनह्यामका लागि ह्याट्रिक गरेका थिए । त्यही गोलबाट उनले प्रिमियर लिगमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने सिएररको कीर्तिमानसमेत भंग गरेका थिए ।
सिएररले सन् १९९५ मा एक वर्षमा ३६ गोल गरेर प्रिमियर लिगमा एक वर्षमा धेरै गोल गर्ने कीर्तिमान रचेका थिए । केनले उनको कीर्तिमान भंग गर्दै एक वर्षमा ३९ गोल गरेका हुन् । केनले सन् २०१७ मा सबै प्रतियोगितामा गरेर कूल ५६ गोल गरे भने उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी बार्सिलोनाका मेस्सीले ५४ गोल गरे ।
‘मैले बुझेसम्म बार्सिलोना केनलाई भित्र्याउन महत्त्वसाथ लागेको छ, रियल मड्रिड पनि त्यो लाइनमा छ,’ सिएररले भनेका छन्, ‘तर, मलाई लाग्छ, उनी टोटनह्याम छाडेर जाँदैनन् ।’
यसअघि पनि केही स्पेनिस सञ्चामाध्यमले बार्सिलोनाले केनलाई निकै आकर्षक रकम खर्चेर भित्र्याउन चाहेको खबर सार्वजनिक गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म बार्सिलोनाले केनका लागि खर्चन सक्ने रकमको अंकबारे भने केही बोलेको छैन ।
त्यस्तै, केनलाई भित्र्याउन रियल मड्रिड पनि लागेको छ । पछिल्लो समय खस्किँदो प्रदर्शनलाई सुधार गर्न रियलले नयाँ खेलाडी खोजिरहेको छ ।